प्ले मा Gaeva छवि "द चेरी बागवानी" Chekhov
प्ले "द चेरी बागवानी" मा Gaeva छवि बुझ्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो Chekhov को आचरण prestavitelyam गर्न belonged कसरी बुझ्न क्रममा आवश्यक छ। यस लेखमा प्ले मा छवि Gaeva विस्तार वर्णन "द चेरी बागवानी।"
मान्छे - मुख्य पात्र को एक भाइ काम गर्छ, Ranevskaya, व्यावहारिक उनको जुम्ल्याहा। आफ्नो छवि, तथापि, महिला को छवि भन्दा कम महत्वपूर्ण छ। उसले आफ्नो बहिनी भन्दा पुरानो थियो तापनि हामी अभिनेता सूचीमा एक "भाइ Ranevskaya" को रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ नायक रुचि हो किन छ, र सम्पत्ति मा नै अधिकार छ।
सामाजिक स्थिति Gaeva
फोटो माथि Stanislavsky Gaeva रूपमा देखाउँछ। लियोनिद Andreevich Gaev - आफ्नो हालत खाएको गर्ने थियो एक landowner "को कैंडी मा।" उहाँले एकदम एउटा निष्क्रिय जीवन छ। तैपनि, उहाँले बगैंचामा ऋण लागि बेचिएको हुनुपर्छ भनेर छक्क छ। यो व्यक्ति पहिले नै 51 वर्ष पुरानो छ, तर उहाँले आफ्नो परिवार छैन। दायाँ आफ्नो आँखा अघि crumbling पुरानो Manor बस्ने मान्छे। उहाँले एफआइआर, पुरानो वैलेट को जिम्मा मा छ। Gaeva विशेषता उहाँले निरन्तर कोही पैसा उधारो कम्तिमा आफ्नो ऋण मा ब्याज र यसको बहिनी को ऋण कवर गर्न प्रयास गर्दै छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा complemented गर्नुपर्छ। पाइप सपना उहाँलाई लागि सबै ऋण को परिशोधन छ। यो घर धनी जहाँ तपाईं बाहिर कुलीन-चाची मा आफ्नो भाग्य प्रयास गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ Yaroslavl, जाने व्यक्ति सुनिश्चित लागि अन्ना दिन कोही एक उत्तराधिकार प्राप्त गर्न आशा।
को आचरण को एक caricature
को आचरण को एक caricature - प्ले "द चेरी बागवानी" मा Gaeva छवि। अझ कुरुप नकारात्मक गुणहरू landowner Ranevskaya यो सबै को absurdity underlines जो उनको भाइ, को वर्ण मा प्रस्तुत। विवरण Gaeva, Ranevskaya विपरीत, चरण दिशामा मुख्य रूप राख्नुभयो। आफ्नो चरित्र प्ले को काम मार्फत मुख्यतया प्रकट गरिएको छ र अन्य वर्ण यसको बारेमा धेरै सानो कुरा।
Gaev तिर मनोवृत्ति
लेखक धेरै सानो हामीलाई पछिल्लो Gaeva बारेमा बताउँछ। तर, हामी यो व्यक्ति शिक्षित छ भनेर बुझ्न, उहाँले खाली हुनत कसरी, सुन्दर भाषामा विचार लुगा लगाउनु गर्न थाह छ। आफ्नो जीवन भर, हामी सम्पत्ति मा बस्ने नायक रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँले जहाँ बिलियर्ड्स, आफ्नो मनपर्ने पेशा एक खेल मा indulged पुरुषहरु क्लब मा एक नियमित थियो। त्यहाँबाट भएकालाई थप समाचार ल्याए। यहाँ उहाँले 6000 मा एक राम्रो वार्षिक तलब एक बैंक मा एक कर्मचारी को स्थिति प्रस्ताव थियो। अरूलाई धेरै यो प्रस्ताव हैरानी। "तपाईं पनि कहाँ सिट!": बहिनी Gaeva स्पष्ट भन्छन् Leonidu Andreevichu। LOPAKHIN पनि Guys यसलाई "धेरै अल्छी" भएकोले प्रस्तावित साइट मा रहन सक्ने छैनन् भनेर विचार, यो आफ्नो शङ्का व्यक्त गरे। मात्र अन्ना, नायक को भान्जी, उहाँलाई विश्वास।
Gaev यस अविश्वास को कारण के हो? परिवेश पनि यो नायक लागि अवहेलना evince। पनि वैलेट YASHA अनादरपूर्ण ढंगमा अतिरिक्त भन्छिन्। का प्ले मा बाटो Gaeva राम्रो बुझ्न हामीलाई मदत गर्नेछ जो यो मुद्दा, समाधान गरौं "द चेरी बागवानी।"
गुण लियोनिद Andreyevich
मान्छे - एक मानिस Jabberwocky बोलाउन सक्ने। उहाँले कहिले काँही सबैभन्दा inopportune क्षणमा मा लफ्फाजी मा indulges। यस कारण, आफ्नो interlocutors नष्ट हुन्छन् र अक्सर शान्त हुन सोधे। Gaev लियोनिद Andreevich आफूलाई यो थाह छ, तर आफ्नो चरित्र को एक अप्रिय सुविधा सामना गर्न सक्दैन। साथै, छवि Gaeva विशेषता उहाँले धेरै बालक जस्तो छ कि थप गर्नुपर्छ। लियोनिद पनि स्पष्ट दृष्टिकोण को आफ्नो बिन्दु स्पस्ट बोल्नु् गर्न सक्षम, आफ्नो राय रक्षा गर्न सकेन। यो चरित्र अक्सर merits मा केहि छैन भन्न सकिन्छ। बरु, उहाँले आफ्नो मनपर्ने शब्द "जसलाई" भन्छन्। हामीलाई चासो प्रश्न निरन्तर अनुपयुक्त बिलियर्ड सर्तहरू रूपमा नायक उदीयमान छन्।
एफआइआर, बहिनी र Nieces संग सम्बन्ध
दासले एफआइआर अझै पनि केही संग भने एक बच्चा, मालिक को लागि जान्छ। उहाँले बन्द यसलाई Gaev न्यानो कोट ल्याउँछ, आफ्नो bryuchek देखि धूलो जनाए। यसैबीच, लियोनिद - पचास वयस्क पुरुष। तथापि, उहाँले यो आफ्नो सेवक को भाग मा यस्ता हेरविचार गर्न लज्जास्पद विचार गरेनन्। नायक पनि उहाँलाई भवदीय संलग्न जो आफ्नो वैलेट, को पर्यवेक्षण अन्तर्गत सुत्न जान्छ। अन्तिम उत्पादन Guys यस्तो भक्ति एफआइआर बावजुद यो बारेमा बिर्सनुहुन्न।
उहाँले आफ्नो बहिनी र आफ्नो Nieces प्रेम गर्नुहुन्छ। मेरो परिवार मा मान्छे मात्र पुरुष छ। तर, त्यो परिवारको टाउको बन्न सकेन। नायक उहाँले पनि यो आउँछन् लाग्यो किनभने, जो कोहीले गर्न सहयोग गर्न सक्षम छैन। यो Gaeva धेरै खोक्रो महसुस संकेत गर्दछ।
सडक भने Gaev चेरी बगैचा?
लियोनिद Gaeva को छवि चेरी बगैचा आफ्नो सम्बन्ध मा disclosed। हाम्रो नायक लागि, उहाँले धेरै, साथै आफ्नो बहिनी लागि हो। मान्छे Ranevskaya रूपमा प्रस्ताव Lopakhin स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। उहाँले "कुरा" क्षेत्रमा आफ्नो सम्पत्ति विभाजित हुनु र थियो तिनीहरूलाई पट्टा गर्न विश्वास गर्दछन्। आखिर, यो व्यापारीहरु, यस्तो LOPAKHIN आफ्नो परिवारलाई ल्याउनेछ। उहाँले एक साँचो aristocrat ठान्नुहुन्छ किनभने, र व्यापारीहरू, यस्तो Ermolai Alekseevichu मा तल हालन यो लियोनिद Andreyevich लागि अस्वीकार्य हुनेछ। Guys यसलाई आफ्नो सम्पत्ति बेच जहाँ एक लिलामी संग फर्केर आउँदा उहाँले देखिने आँसु आफ्नो आँखा तल राखे। तर, त्यो बेला तुरुन्तै सुधार आफ्नो मूड को बलमा मार को क्यू सुन्नुहुन्छ। यो वास्तवमा भन्ने नायक अचाक्ली अनुभव द्वारा विशेषता छैन बताउँछ। यो छवि Gaeva complements कि प्ले "द चेरी बागवानी" Chekhov महत्त्वपूर्ण सुविधा छ।
मूल्य छवि Gaeva
वर्ण को शासकहरुले बनेको छ जो सर्किट, छवि Antonom Pavlovichem Chehovym पूरा हामी इच्छुक छन्। आफ्नो आदर्श रक्षा सक्ने छैन राम्ररी शिक्षित aristocrats - लेखक को "आफ्नो समय को नायक" हामीलाई प्रस्तुत गरेको छ। किनभने LOPAKHIN जस्तै आचरण मान्छे को यो कमजोरी को समाज मा एक मूख्य स्थिति लिन मौका छ। Anton Pavlovich विशेष सबैभन्दा understated तरिका Gaeva उहाँलाई caricature बनाउन कमेडी "द चेरी बागवानी", मा। यो शासकहरुले obmelchaniya को हदसम्म देखाउन क्रममा आवश्यक थियो।
लेखक सफल, "द चेरी बागवानी" थियो कि?
कलाकृति Chekhov (को पोर्ट्रेट माथि दिइएको उहाँलाई) ठूलो सार्वजनिक पुकारा कारण। को अभिजात वर्ग, यो प्ले गर्न बरु महत्वपूर्ण मनोवृत्ति स्वामित्वको आफ्ना समकालीनहरूको धेरै। तिनीहरूले सर्कल, कक्षा को गलत छविको अज्ञानता मा Chekhov आरोप लगाए। Chekhov शायद यसको लागि आलोचना हुन। आखिर, उहाँले पूर्ण बाहिर पारिएको छ कि, बस एक कमेडी, तर वास्तविक farce सिर्जना गर्न खोजे। निस्सन्देह, उहाँले Gaeva छवि असफल भयो। को कमेडी देखि एक उद्धरण संग "द चेरी बागवानी" हाम्रो समकालीनहरूको धेरै गर्न परिचित र प्ले नै साहित्य स्कूल पाठ्यक्रम मा समावेश गरिएको छ। यो उत्पादन अझै पनि हाम्रो देशको थिएटर मा धेरै लोकप्रिय छ। यो सबै दृश्य को एक कलात्मक बिन्दुबाट "द चेरी बागवानी" को सकारात्मक मूल्य देखाउँछ।
म कहाँ बस्न गर्नुपर्छ? जीवनको स्तर द्वारा देशहरूको र्याङ्किङ्ग
घूसखोरी - यो हाम्रो पछिल्लो वा वर्तमान छ?
यो बप्तिस्मा मा अन्दाज लगाउनु गर्न सम्भव छ? इपिफ्यानी Name प्रेतविद्यासम्बन्धी
एक स्कर्ट संग ज्याकेट - मौसम को एक नयाँ हिट
लामो स्कर्ट आफ्नो लोकप्रियता को शिखर।
स्वनिर्णयगत आर्थिक नीति
अपार्टमेन्ट घर (MKD): को अवधारणाहरु र सुविधाहरू ट्रान्सक्रिप्ट
मारिया कोजविकोभोभा को पति - एवर्जी वसेलिव
वयस्क मा पहेंलो snot: कारणहरू र उपचार
प्रकाश अपार्टमेन्ट: एलईडी प्रकाश को प्रकार
को नियुक्ति र चयन: महिला तथा पुरुषहरूका लागि मूत्र संबंधी पैड
"YouTube" मा खाता मेटाउन कसरी विवरण
झोला थर्मस: सजिलो र सुविधाजनक